The LG Style 5 dị ugbu a na US ahịa | Androidsis
LG bidoro n'etiti etiti ọhụrụ ya na mbido July nke afọ a. Nke a na-abịa dị ka LG Style 5 ma gosipụta otu n'ime ndị nrụpụta ọkwa kachasị ala nke Qualcomm, nke na-abụghị nke ọzọ Snapdragon 450 nke mbinye aka. Kemgbe ahụ, ọ bụ naanị ụfọdụ ahịa ruru eru maka ọdụ a, mana ọ bụghị United States.
Site ugbu a gaba Enwere ike ịzụta ngwaọrụ ahụ na mpaghara America maka ọnụahịa gọọmentị nke anyị na-ekwu ugbu a.
A na-enye ekwentị emeghe na United States maka ọnụ ahịa $ 299.99. Agbanyeghị, Best Buy na-enye ya na mbelata $ 50 ma ọ bụrụ na ejiri Verizon ma ọ bụ AT&T zụta ya yana $ 100 kwụsịrị ma ọ bụrụ na agbanyere ya na Sprint.
Dabere na njirimara na nkọwapụta nke mkpanaka a, ekwesịrị iburu n'uche na na-abịa na ihuenyo 6.2-inch diagonal IPS LCD nwere mkpebi FullHD + na okpokolo agba kpochapụwo nke na-adịghị eji notch.. N'aka nke ya, o nwere Qualcomm Snapdragon 450 ahụ e kwuru n'elu, 14 nm chipset na 64-bit architecture nke nwere ike iru oge ọrụ kachasị nke 1.8 GHz ekele maka cores anọ Cortex-A53.
SoC nke edobere n'ime jikọtara ya na a 3 GB Ram na 32 GB ohere nchekwa, nke enwere ike ịgbasa site na iji kaadị microSD. Igwefoto azụ nke ngwaọrụ a nwere mkpebi megapixel 13, ebe ihe mmetụta ihu bụ 5 MP. Batrị na-eme ihe niile na-arụ ọrụ bụ 3,500 mAh.
N'aka nke ọzọ, LG Stylo 5 na-abịa na nkwado maka Njikọ 4G LTE, Wi-Fi 802.11 a / c, Bluetooth 4.2, GPS ma jikọta ọdụ ụgbọ USB-C yana njikọ jakị audio 3.5 mm. N'ikpeazụ, a kwadokwara ya na onye na-agụ mkpịsị mkpịsị aka azụ, pensụl, ihe mmetụta accelerometer na ihe mmetụta nso.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » LG Style 5 dị ugbu a na ahịa US
Huawei's HarmonyOS na-abịakwa smartwatches na laptọọpụ